बालबालीकाको हेरचाह कसरी गर्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह
बालरोग विशेषज्ञ, मध्येपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत
बालबालीका वर्षाको समयमा पानीमा भिज्छन् । त्यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ ?
वर्षाको समयमा विशेषगरी ढलबाट फोहोर पानी बगेर आउँछ । बच्चाहरु ढलको पानी वा आकाशबाट आएको पानीमा भिज्ने गर्दछन् । जसले गर्दा झाडापखाला, टाईफाईट जस्ता रोगहरु लाग्ने गर्दछ । श्वासप्रवासको समेत समस्या बच्चाहरुमा देिखन्छ ।
धमिलो पानीमा खेल्ने बालबालीकालाई कस्तो समस्या हुन्छ ?
धमिलो पानीमा विशेषगरी जुकाहरु हुने गर्दछन् । झाडापखालाका किटाणुहरु पनि हुन्छन् । रिकेटशिया भन्ने रोग पनि लाग्ज सक्छ । यसले बच्चाहरुको मृगौलामा असर गर्दछ । र आंखा, कान पाक्ने समस्या हुन्छ ।
वर्षाको समयमा बच्चाहरुलाई कसरी हेरचाह गर्न सकिन्छ ?
वर्षाको समयका धेरैजसो पानीको कारण समस्या भोग्नु पर्दछ । कम्तिमा पनि पिउने पानीलाई ४५ मिनेटसम्म उमालेर सेलाएपछि फिल्टर गरेर खाने गर्नु पर्दछ । वर्षाको समयमा बच्चाहरुलाई पानीमा भिज्न दिनु हुंदैन । वायुप्रदुषणका कारण आकाशबाट पर्ने पानीमा पनि विभिन्न किसीमका समस्या आईपर्छन् । त्यसैले पानी परेको बेलामा बच्चा लिएर बाहिर हिंड्नु हुंदैन । खाना पनि सकेसम्म चम्चाले खाने गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो समाजमा अभिभावकहरु बालस्वास्थ्यमा कत्तिको सचेत छन् ?
साना बालबालीकाहरु जबसम्म आफ्नो निर्णय आंफै लिन सक्दैनन् तबसम्म आमाले नै विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । म त भन्छु संसारमा सबैभन्दा ठुलो काम आमा बन्नु हो ।
घरपरीवारले पनि यसमा साथ दिनुपर्दछ । बच्चा २/३ वर्ष नहुँदा सम्म आमालाई कुनैपनी काममा लगाउनु हंदैन । हाम्रो चलन कस्तो छ भने बच्चाको आमालाई खाना पकाउन देखी घरको र घर बाहिरको कामको बोझ बढी दिईन्छ । जसले गर्दा बच्चाले स्याहार पाउंदैन र बच्चा अस्वस्थ हुन्छ ।
एउटा स्वस्थ बच्चाको लागी कस्तो खानपान र वातावरण आवश्यक पर्दछ ?
एउटा बालक स्वाथ्य हुनको लागी केहि बुंदाहरु छन् । खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । बच्चा ६ महिनाको नहुंदा सम्म नितान्तरुपमा आमाको दुधले मात्रै पुग्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ । जसको लागी आमाले निम्न कुराहरुमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।
गेडागुडिको झोल, माछामासु र दहि दुुध आमाले सेवन गर्नुपर्दछ । र बच्चालाई नियमित रुपमा ६ महिनासम्म आमाको मात्रै दुध खुवाउनु पर्छ । यसो गरियो भने बच्चाको रोगसंग लड्ने शक्तिको अत्याधिक विकास हुन्छ ।
खोप पनी नछुटाई लगाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय खोप तालीका अनुसारका सबै खोप पुरा गर्नुपर्दछ । अन्य खोपहरुपनी लगाउनु पर्दछ । स्वास्थ वातावरणमा बच्चा हुर्कन पाउनुपर्दछ ।
विशेष गरी बच्चा ३ कुरामा स्वस्थ हुनुपर्दछ ।
१ शारिरीक : रोगबाट मुक्त बच्चा ।
२ मानशिक : घरमा संधै बाबुआमाको झगडा भै रहन्छ भने बच्चा पनी झगडालु हुन्छ ।
३ सामाजीक : सामाजीक रुपमा त बच्चा झनै स्वस्थ हुनु जरुरी छ । सहयोगी, नम्र अनुशासित । यो हुनको लागी घरमा बाबुआमाले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । सामाजीक संस्कार समेत सिकाउन जरुरी छ ।
यहां बालविशेषज्ञ डाक्टर पनी हुनुहुन्छ । वर्षाको समयमा विशेषगरी कस्ता रोगहरु बच्चाहरुमा देखिने गरेका छन् ?
संक्रमणका रोगहरु देखिने गरेका छन् । आर्थिक हैसीयतसंग मिल्ने रोगहरु देिखने गरेको पाईन्छ । जस्तै कुपोषण, कम तौल, संक्रमण जस्ता रोगहरु ।
अन्तमा आम अभिभावकहरुलाई बालबालीका स्वस्थ राख्नको लागी के सल्लाह दिन चाहानुहुन्छ ?
बच्चा जन्मनु अगाडि पुर्वतयारी गरेर मात्रै जन्माउनु पर्छ । जसले गर्दा बच्चा जन्मिसकेपछि आउने समस्या निकै कम हुने गर्दछन् । आर्थीक जोहो र घरपरिवारले समेत घरमा बच्चा जन्मंदै छ भने अब एकदुई वर्ष बच्चाको आमालाई घरको काम लगाउंनु हंदैन भन्ने सोच बनाउनु जरुरी छ ।
अर्को कुरा बच्चालाई शारिरीक, मानसिक र सामाजीक रुपमा स्वस्थ राख्न निकै जरुरी छ । ६ महिना सम्म आमाको दुध त्यसपछि आमाको दुधसंगै अन्य पोसीलो खानेकुरा र बच्चा ५ ÷६ वर्षको हुंदादेखी बाटै सामाजीक संस्कार समेत सिकाउन सके आजको बालक भोलीका देशहांक्ने कर्णधार बन्न सक्छ ।
२०७५ असोज ६ मा प्रकाशित